တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: အာရီရန်နှင့် မြနန္ဒာ
Posted by မေဓာဝီ at 12:42 PM
အာရီရန်နဲ့ မြနန္ဒာက တဆင့်ပြန်လည်ဖေါ်ပြရအောင်ကို ကောင်းပါပေတယ်။
1/06/2008 8:01 PM
အရေးအသားရော၊ အကြောင်းအရာရော တင်ပြဟန်ရော ၀ါရင့် စာရေးဆရာ တယောက် ရေးထားသလိုပါပဲ။ ဆရာ ၀င်းပေါ်မောင်ကို လေးစားပါတယ်။ ကြိုးစား စာရိုက်တင်ပေးတဲ့ မမေကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော် သုံးခေါက်လောက် ပြန်ဖတ်ဖြစ်သွားတယ်။
1/07/2008 3:40 AM
ဒီpostလေးဖတ်ပြီး အိပ်ပျော်သွားတော့ ကိုးရီးယားကမြနန္ဒာ၊ အင်္ဂလန်ကမြနန္ဒာ၊ ထိုင်းကမြနန္ဒာ၊ အမေရိကားမြနန္ဒာ၊ စင်္ကာပူကမြနန္ဒာ၊ ...မြနန္ဒာ၊ ...မြနန္ဒာ၊ ...မြနန္ဒာ...အားလုံးအတူတွဲလို့ မန်းတောင်ရိပ်ကို တကယ်ခိုပြီး အတူသီဆိုကြတာ အာရီရန်ကတောင် အရှူံးပေးရတယ်လို့အိပ်မက်မက်တယ်...
ဒီpostလေးအတွက် (ကို)၀င်းပေါ်မောင် နဲ့ မေ့ ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Very nice one! Thanks for sharing..Ma May.
1/07/2008 1:01 PM
Li mean is Chinese traditional distant unit.
1/08/2008 6:03 AM
Tun Min Hein said...
That's really good. I was singing mya na dar song when i reading this blog. :)